Interpol, lalàna iraisam-pirenena momba ny heloka bevava, extradition ary maro hafa: toro-hevitra avy amin'ny mpisolovava mpiaro ny heloka bevava
Interpol, lalàna iraisam-pirenena momba ny heloka bevava, extradition ary maro hafa
Torohevitra avy amin'ny mpisolovava mpiaro ny heloka bevava any UAE
Lalàna iraisam-pirenena momba ny heloka bevava UAE
Ny fiampangana heloka be vava dia tsy fanandramana mahafinaritra velively. Ary vao mainka mihasarotra izany raha toa ka natao nanerana ny fari-pirenena io heloka bevava io. Amin'ny tranga toa izany dia mila mpisolovava mahatakatra sy manana traikefa amin'ny fiatrehana ny mampiavaka ny fanadihadiana sy fanenjehana iraisam-pirenena momba ny heloka bevava ianao.
Tao amin'ny Amal Khamis Advocates, nahavita valiny mahomby isan-karazany izahay tamin'ny raharaha fiarovana heloka bevava iraisam-pirenena. Ireo mpisolovavanay mpiaro ny heloka bevava dia manana fahalalana sy traikefa hiatrehana ireo olana mifandraika amin'ny fiarovana iraisam-pirenena momba ny heloka bevava.
Amin'ity lahatsoratra ity dia hodinihintsika ny lalàna iraisam-pirenena momba ny heloka bevava ary ny antony ilanao mpisolovava mahalala ny tady.
Inona ny Interpol?
Fikambanan'ny polisy misahana ny heloka bevava iraisam-pirenena (Interpol) dia fikambanana eo amin'ny fitondrana. Niorina tamin'ny fomba ofisialy tamin'ny taona 1923, manana firenena mpikambana 194 izy izao. Ny tanjony lehibe dia ny ho toy ny lampihazo izay ahafahan'ny polisy manerantany manambatra hiady amin'ny asan-jiolahy ary hampilamin-tsaina an'izao tontolo izao.
Ny Interpol dia mampifandray sy mandrindra tambajotranà polisy sy manam-pahaizana momba ny asa ratsy manerana an'izao tontolo izao. Ny biraon'ny foibe dia fantatra amin'ny hoe Secretariat General izay any Lyon, France.
Isaky ny firenena mpikambana ao aminy dia misy INTERPOL National Central Bureaus (NCB). Ireo birao nasionaly ireo dia miasa.
Fanampiana eo amin'ny Interpol amin'ny famotopotorana sy ny fanadihadiana ny antontan'isa momba ny heloka bevava, ary koa ny fanarahana ireo mpandositra ny lalàna. Manana angon-drakitra afovoany izy ireo izay misy fampahalalana marobe momba ireo olon-dratsy izay azo jerena amin'ny fotoana tena izy. Amin'ny ankapobeny dia manohana firenena amin'ny ady atao amin'ny asan-jiolahy ity fikambanana ity.
Ny sehatra lehibe ifantohana dia ny heloka bevava amin'ny cyber, ny fandikan-dalàna ary ny asa fampihorohoroana. Ary matoa mivoatra hatrany ny asan-jiolahy, dia manandrana mamorona fomba bebe kokoa hanarahan-dia ireo olon-dratsy ihany koa ny fikambanana.
Ny fanamarihana Interpol
Ity fampandrenesana ity dia fangatahan'ny mpampihatra lalàna amin'ny firenena iray, mangataka fanampiana amin'ny firenena hafa hamaha heloka na hisambotra mpanao heloka bevava. Raha tsy misy io fampandrenesana io dia tsy azo atao ny manara-dia ireo mpanao heloka bevava amin'ny firenena iray mankany amin'ny tany hafa. Ny fampandrenesana dia misy ny fizarana fampahalalana sy fampiasana ny mpiasa; izay ilaina rehetra hahavitana ny asa.
Misy karazany fito ny fampandrenesana Interpol ao anatin'izany:
Voasary: Rehefa tandindomin-doza ny filaminan'ny besinimaro ny olona iray na ny hetsika iray dia namoaka fampandrenesana voasary ny firenena. Izy ireo koa dia manome izay fampahalalana rehetra ananany momba ilay hetsika na amin'ilay ahiahiana. Ary andraikitr'io firenena io ny mampitandrina ny Interpol fa mety hitranga ny hetsika toy izany noho ny fampahalalana azony.
Blue: Ity fampandrenesana ity dia ampiasaina hitadiavana olona ahiahiana izay tsy fantatra ny toerana misy azy. Ireo firenena mpikambana hafa ao amin'ny Interpol dia manao fikarohana mandra-pahita ilay olona ary ampahafantarina ny fanjakana izay manome. Ny extradition dia azo tanterahina avy eo.
Mavo: Mitovy amin'ny filazana manga, ny fampandrenesana mavo dia ampiasaina hitadiavana olona tsy hita. Na izany aza, tsy toy ny fanamarihana manga, tsy natao ho an'ireo ahiahiana ho mpanao heloka bevava io fa ho an'ny olona, ​​matetika zaza tsy ampy taona izay tsy hita. Natao ihany koa ho an'ireo olona tsy afaka mamantatra ny tenany noho ny aretin-tsaina.
Mena: Midika io fampandrenesana mena io fa nisy ny heloka be vava nitranga ary mpanao heloka bevava mampidi-doza ilay ahiahiana. Izy io dia manome torolàlana amin'ny firenena aiza no ahitan'ny olona ahiahy azy io ary hanenjika sy hisambotra azy mandra-pahatongan'ny famoahana azy.
Maitso: Ity fanamarihana ity dia tena mitovy amin'ny fampandrenesana mena miaraka amina antontan-taratasy sy fanodinana mitovy amin'izany. Ny tena maha samy hafa azy dia ny fanamarihana maitso ho an'ny heloka bevava tsy dia lehibe loatra.
Black: Ny fanamarihana mainty dia ho an'ireo faty tsy fantatra izay tsy olompirenena. Navoaka ny fampandrenesana mba hahafantaran'ny firenena mitady rehetra fa ao amin'io firenena io ny faty.
Fampandrenesana ho an'ny ankizy: Rehefa misy zaza na zaza tsy hita, dia manome fampandrenesana amin'ny alàlan'ny Interpol ny firenena mba hidiran'ny firenen-kafa amin'ny fikarohana.
Ny fampandrenesana mena no lehibe indrindra amin'ny fampandrenesana rehetra ary ny famoahana dia mety hiteraka vokadrana eo amin'ireo firenena manerantany. Mampiseho izany fa tandindomin-doza ho an'ny filaminam-bahoaka ilay olona ary tokony horaisina toy izany. Ny tanjon'ny fampandrenesana mena dia mazàna ny fisamborana sy fampodiana. Amin'ity fotoana ity dia fanontaniana mety hapetraka ny hoe inona ny extradition?
Inona no atao hoe Extradition?
Araka ny lalàna iraisam-pirenena, ny extradition dia ny dingana izay hamindran'ny firenena iray olona iray amin'ny firenena hafa mba hanenjehana azy ireo na hanasazy noho ny fandikan-dalàna nataony tany amin'ny firenena farany.
Izany dia mitranga amin'ny ankapobeny rehefa nanao heloka bevava tao amin'ny fanjakana nangataka ilay olona saingy nandositra tany amin'ny fanjakana nampiantrano.
Ny fiheverana ny extradition dia tsy mitovy amin'ny sesitany, fandroahana, na fanilihana. Ireo rehetra ireo dia midika fanonganana olona an-kery fa amin'ny toe-javatra samihafa.
Ny olona tafarina dia misy:
ireo izay efa voampanga nefa mbola tsy niatrika fitsarana,
ireo izay notsaraina tsy teo, ary
Ireo izay notsaraina ary voaheloka saingy afa-nitazona ny fonja.
Ny lalàna extradition an'ny Emirà Arabo Mitambatra dia fehezin'ny lalàna federaly laharana faha 39 an'ny 2006 (lalàna extradition) ary koa ny fifanarahana fampodiana izay nosoniavin'izy ireo sy nohamarinin'izy ireo. Ary raha tsy misy fifanarahana fampodiana, ny mpampihatra lalàna dia hampihatra ny lalàna eo an-toerana sady manaja ny fitsipiky ny fifamalian'ny lalàna iraisam-pirenena.
Mba hahafahan'ny UAE hanaraka ny fangatahana extradition avy amin'ny firenena hafa, ny firenena mangataka dia tsy maintsy mahafeno ireto fepetra manaraka ireto:
Ny heloka bevava izay foto-kevitry ny fangatahana famoahana dia tsy maintsy iharan'ny sazy ambanin'ny lalàn'ny firenena mangataka ary ny sazy dia tokony ho iray izay mametra ny fahalalahan'ny mpandika lalàna mandritra ny herintaona farafahakeliny
Raha misy ifandraisany amin'ny fanasaziana ny sazy mihantona ny resaka famoahana, dia tsy tokony ho latsaky ny enim-bolana ny sazy mihatra.
Na izany aza, ny UAE dia mety mandà ny hampiditra olona raha:
Ny olona resahina dia teratany UAE
Ny heloka bevava mifandraika dia heloka ara-politika na misy ifandraisany amin'ny heloka bevava politika
Ny heloka dia mifandraika amin'ny fanitsakitsahana adidin'ny tafika
Ny tanjon'ny famoahana dia ny fanasaziana ny olona iray noho ny fivavahany, ny firazanany, ny zom-pireneny na ny fomba fijeriny ara-politika
Ilay olona voarohirohy dia iharan'ny fametavetana, fampijaliana, fampijaliana mahery setra, na fanasaziana manala baraka, tao amin'ny firenena nangataka, izay tsy misy ifandraisany amin'ny heloka bevava.
Ilay olona dia efa nohadihadiana na notsaraina tamin'io asa ratsy io ihany ary na novotsorana na nohelohina ary efa nahazo ny sazy mihatra aminy
Ny fitsarana UAE dia namoaka didim-pitsarana momba ny fandikan-dalàna
Mifandraisa amin'ny mpisolovava iraisam-pirenena momba ny ady heloka bevava any UAE
Tsy ny mpisolovava mpiaro heloka bevava rehetra ao UAE no manana traikefa sy fahalalana ilaina hamahana ny raharaha heloka bevava iraisam-pirenena. Matetika ny tranga toy izany dia misy fifampiraharahana amin'ny governemanta federaly, ary koa ny governemanta vahiny amin'ny tranga famoahana.
Ary koa, ny lalàna mifehy ny famongorana, ny fifanarahana fanampiana ara-dalàna, ny didim-pitsarana momba ny heloka bevava, ary ny olana hafa mifandraika amin'izany amin'ny firenena maro dia sarotra. Araka izany, zava-dehibe ny fanananao mpisolovava iray izay manana rakitsoratra efa voaporofo tamin'ny fikirakirana ny olana momba ny heloka bevava iraisam-pirenena.
Ireo mpisolovava anay ao Mpisolo vava Amal Khamis za-draharaha sy mahay miady amin'ny raharaha extradition iraisam-pirenena hiarovana ny mpanjifanay. Miaraka amin'ny zavatra niainantsika, voatahiry ny hoavinao satria hiantohana izahay fa manohana anao ny raharaha. Izahay dia orinasan-dalàna momba ny heloka bevava tena matihanina, manampahaizana manokana amin'ny lalàna miaro ny heloka bevava sy ny raharaha mifandraika amin'izany. Mifandraisa aminay anio ho an'ny extradition, fanamarihana Interpol na raharaha lalàna iraisam-pirenena momba ny heloka bevava.